Vaovao - Fitaovana Laser Code VIN ho an'ny indostrian'ny fiara misy kodiarana roa
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny fiara tsy mitsaha-mitombo eto amintsika, ny olana momba ny fahalotoan'ny tontolo iainana ateraky ny fanararaotan'ny fiara dia nanjary lehibe kokoa. Araka izany, ny governemanta dia manentana amin'ny fomba mahery vaika ny fomba maitso hitetezana. Mitombo ny isan'ireo fiara mpitondra angovo vaovao any Sina. Ny fiara misy kodiarana roa dia malaza amin'ny arabe an-tanàn-dehibe noho ny vidiny mora sy ny habeny. Ankehitriny, fiara elektrika misy kodiarana roa no hita eny rehetra eny amin'ny arabe. Saingy amin'ny famoahana ny GB vaovao, ny fanjakana dia mitaky ny fiara kodiaran-droa rehetra eny an-dalana mba hanana fahazoan-dàlana.
Vokatr'izany dia nandalo ny fombafomba fisoratana anarana ny fiara mandeha amin'ny herinaratra ny olom-pirenena, saingy mihabe ny fifandirana eo amin'ireo tompona fiara mpitondra herinaratra sy magazay, ary mihoatra ny antsasak'izy ireo no mifandraika amin'ny kaody VIN, izay nifantoka tamin'ny lafiny telo: any dia tsy misy kaody VIN amin'ny fefy na taratasy fanamarinana; ny kaody VIN amin'ny fefy dia tsy nifanaraka tamin'ny taratasy fanamarinana; ny kaody VIN dia nampiasaina taloha. Ireo olana ireo dia noho ny tsy fanaovan'ireo mpanamboatra fiara kodiarana roa ireo lalàna mifehy ny encode VIN.
Mikasika io trangan-javatra io, ny fenitra nasionaly vaovao dia mitaky ny marika kodiaran-droa miaraka amina kaody VIN misy litera 17 sy isa alohan'ny fanaterana. Ity dia lahatsoratra manokana ho an'ny famantarana fiara, toy ny "Karatra ID".
Amin'izao fotoana izao, ny kaody VIN dia mazàna marika amin'ny alàlan'ny fampiasana dot peen marking machine, fa ny fenitra nasionaly vaovao kosa dia mitaky ny halalin'ny mari-pana mihoatra ny 0.2mm, ary azo esorina ny atiny manisy marika. Noho ny halalin'ny fanamarihana ny dot peen marking machine dia tsy afaka mahatratra ny takian'ny fenitra nasionaly vaovao, dia ho very sy tsy mazava ny tarehin-tsoratra. Ary mitabataba be ilay masinina, izay nihoatra ny fetra zakan'ny sofin'ny olombelona, ​​misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina amin'ny mpiasa. Noho izany, ny laser BOLN dia nanamboatra milina marika marika VIN ho an'ny indostrian'ny fiara misy kodiarana roa.
Ny milina fanamarihana laser amin'ny laser dia be mpampiasa amin'ny singa elektronika, fitaovana, indostrian'ny herinaratra, kojakoja ho an'ny mpanjifa isan'andro, sensor, faritra misy fiara, fitaovana elektronika 3C, asa-tanana, fitaovam-pitoviana, fanomezana sy firavaka, fitaovana ara-pitsaboana, fitaovana elektronika avo lenta, kojakoja fandroana, indostrian'ny bateria, indostria IT, sns. Ary ny tarehin-tsoratra dia mazava tsara, tsy mora ny mitafy, ary manana ny asan'ny tamper proof. Ankoatr'izay, ny milina fanamarihana namboarina dia afaka mifandraika amin'ny rafitra MES orinasa ary mitazona ny kaody VIN rehetra ho an'ny fitadiavana. Ny laser BOLN dia nanamboatra milina marika marika VIN ho an'ny orinasa maro, toa ny YADEA, Segway-Ninebot, Niu Technologies.